Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » Apple kwụsịrị ire Turkey ọhụrụ ka ego Turkey dara
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News • Akwụkwọ akụkọ USA
Lira Turkish gbadara na lira 13.5 kwa dollar ụnyahụ
Ọnụ ahịa ire ngwaahịa Apple na Turkey gụnyere ọtụtụ ụtụ isi na ụgwọ, yabụ na ha na-akwụkarị ụgwọ dị elu karịa na United States.
A nkọ mkpọda nke toro toro's mba ego amanye American technology ụlọ ọrụ Apple kwụsịtụ ire ngwaahịa ya niile site na webụsaịtị Turkish ya.
Apple A na-atụ anya na ọ ga-ebuli ọnụ ahịa iji belata mbelata nke uru ngwaahịa ya n'ihi ọdịda nke lira Turkish, nke dara na ndekọ dị ala nke lira 13.5 kwa dollar ụnyaahụ.
Ugbu a, Apple'Slọ ahịa dị n'ịntanetị nke Turkish anaghị ekwe ka ndị ọrụ tinye ngwaahịa na ụgbọ ala, yana ihe niile akpọrọ 'adịghị adị nwa oge.'
Ọnụahịa ire nke Apple ngwaahịa na toro toro gụnyere ọtụtụ ụtụ isi na ụgwọ, yabụ na ha na-erikarị nnukwu ọnụ karịa na United States. Agbanyeghị, mgbe lira kwụsịrị ụfọdụ 15%, ọnọdụ ahụ laghachiri, nke mere ka Apple kwụsị ire ahịa niile ruo mgbe ọ ga-edozi ọnụ ahịa ya.
Ego Turkey jisiri ike weghachi ụfọdụ n'ime mfu ya taa, na-arịgo na lira 12.6 kwa dollar site na 09:19 GMT, na-akara uru 0.8% karịa ụbọchị gara aga. N'agbanyeghị nke ahụ, mfu ya megide greenback guzoro na 40% n'afọ a, yana mbelata 19% n'ime ụbọchị iri gara aga naanị.